इन्डक्सन प्रयोगबापत महसुल छुट दिने गैरजिम्मेवार वक्तव्य, उपभोक्तामा भ्रम छर्ने हर्कत - UrjaKhabar इन्डक्सन प्रयोगबापत महसुल छुट दिने गैरजिम्मेवार वक्तव्य, उपभोक्तामा भ्रम छर्ने हर्कत - UrjaKhabar
काठमाडौं । बिहीबार अपरान्हतिर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवालयबाट एउटा सूचना आयो । त्यसमा ‘इन्डक्सनमा खाना पकाउँदा विद्युत महसुलमा २० प्रतिशतसम्म छुट’ भन्ने उल्लेख थियो ।
समाचार शैलीमा आएको सूचनामा इन्डक्सनबाट खाना पकाउने ग्राहकलाई १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
अझ सूचनामा ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिन निर्देशन दिनुभएको हो’ भनिएको छ ।
मन्त्रालयबाट आएको यस्तो सूचना सरासर भ्रमपूर्ण, गैरजिम्मेवार र सर्वसाधारणलाई उल्लु बनाउने खालको देखिन्छ । मन्त्री जस्तो व्यक्तिले यस्तो भ्रमपूर्ण सन्देश तथा सूचना दिनु आश्चर्य हो । सामान्य जिम्मेवारी समेत बोध नगरी यस्तो सूचना प्रवाह गर्नुले मन्त्री कतिसम्म लापरबाही छन् भन्ने देखाउँछ ।
मन्त्रीले भने झैँ इन्डक्सन चुलो प्रयोगकर्तालाई २० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने आधार के हो ? ग्राहकले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरेको छ वा छैन भन्ने कसरी जानकारी लिने ? के घरघरमा इन्डक्सनका लागि मात्र छुट्टै मिटर राखिएको हुन्छ ? इन्डक्सन चुलो चलाउँदा कति बिजुली प्रयोग भयो वा नचलाउँदाको अवस्था के हो ? कसले जानकारी दिने ?
प्राधिकरणका ग्राहक करिब ४० लाख छन् । तिनमा कति ग्राहकले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरेका छन् भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ ? घरघरमा गएर कसले जाँच गर्ने ? वा यसरी घोषित छुट कुन महिना वा अवधिमा पाउने ? के प्राधिकरणको जनशक्ति वा क्षमताले यो गर्न सक्छ ? यी यावत विषय प्राविधिक हुन् । हावा गफ र भ्रमपूर्ण भाषणले पुष्टि हुँदैन ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ ) को त्रासका कारण मुलुक नै लकडाउन भएको छ । सारा उद्योगधन्दा बन्द छन् । विद्युत खपत साविकको भन्दा आधा घटेको छ । भारतबाट हुने आयातसमेत ५० प्रतिशतभन्दा कममा झरिसक्यो । यस्तो अवस्थामा ग्यासको साटो विद्युत खपतमा प्रोत्साहन गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
तर, त्रासको वातावरण देखाएर सर्वसाधारणलाई कपोलकल्पित सन्देश फैलाउनु बेमाइनी हो । यसलाई मन्त्रीको सस्तो लोकप्रियताको भोक वा धङ्धङी भन्नुपर्छ । पहिलो कुरा इन्डक्सन चुलो वा घरायसी विद्युतीय उपकरणका लागि मात्र महसुलको व्यवस्था छैन । यो सम्भवै नहुने विषय हो । अर्को, यस्तो चुलो प्रयोगकर्ता बारेको तथ्यांक सरकार वा मन्त्रालयले राखेको छैन ।
बरु यस्तो अवस्थामा विद्युत बढी खपत गर्ने उपभोक्तालाई थोकमा निश्चित युनिटसम्म छुट दिन सकिने भनेको भए सकारात्मक सन्देश जान सक्थ्यो । यही पनि मन्त्रालय वा प्राधिकरणलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्डक्सन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
महसुलको हकमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निश्चित युनिटसम्म छुटको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिन सक्छ । यस्तो निर्देशन मन्त्रालयले प्राधिकरणमा पठाएर सञ्चालक समितिले पास गरको हुनुपर्छ । समितिले पास गरेको विवरण विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृत हुनुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेको आधारमा मन्त्रालय वा प्राधिकरणले महसुल तोक्न सक्दैनन् । यो अधिकार नियमन आयोगलाई मात्र छ । यी विषयमा मन्त्री आफैं जानकार छन् । जानकार हुँदा–हुँदै गलत र भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्नुलाई लोकप्रियताको भोक भन्नुको विकल्प हुँदैन ।
मन्त्रालयबाट सूचना प्राप्त हुनासाथ यसबारे प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग जानकारी लिँदा उनले महसुल छुटबारे तत्काल छलफल नभएको बताए । ‘इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा खपत हुने विद्युतको परिमाण थाहा हुँदैन, ग्राहकले यसका लागि मात्र भनेर मिटर राख्देनन,’ उनले भने, ‘यस्तो अन्योलको अवस्थामा महसुल छुट दिने भन्ने हुँदैन ।’ यद्यपि, सरकारकाे याेजना कार्यन्वयनमा सहयाेग गर्न प्राधिकरण तयार रहेकाे उनकाे भनाइ छ ।
प्राधिकरण अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले विभिन्न सञ्चार माध्याम शुक्रबार (चैत १४ गते) सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने त्यहीँ महसुल छुटको निर्णय गर्ने बताएका छन् । यो पनि गलत र भ्रमपूण सन्देश हो । फेरि पनि कानुनअनुसार मन्त्रालय वा प्राधिकरणसँग महसुलको निर्णय गर्ने अधिकार नै हुदैन ।
यसरी गर्न सकिन्छ छुट
सरकार वा मन्त्रालयले उपभोक्तालाई विद्युत महसुलमा छुट दिने योजना नै बनाएको हो भने त्यसका विकल्प छन् । पहिलो, माथि उल्लेख गरे झैँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले आयोगमा प्रस्ताव प्रेस गर्नुपर्छ । त्यही आधारमा निर्णय हुन सक्छ ।
दोस्रो, लकडाउनको अवधिमा १०० देखि १५० वा २०० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको हकमा २० प्रतिशत वा निश्चित युनिट छुट भन्न सकिन्छ । यसो गर्न पनि प्राधिकरणले आयोगमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ ।
तेस्रो, उपभोक्ताको घरघरमा टिओडी (टाइम आफ डे) वा स्मार्ट मिटर जडान भएको हुनुपर्छ । यसो हुँदा बिहान, दिउँसो र साँझको खपत युनिट रेकर्ड हुन्छ । यही आधारमा छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, टिओडी मिटर उद्योग वा १० केभिए भन्दा बढी क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान हुनुपर्छ । ग्रार्हस्थ उपभोक्तामा यस्तो व्यवस्था नै हुँदैन । स्मार्ट मिटर जडानमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म पहल नै सुरु गरेको छैन । त्यो भविष्यमा गर्न सकिने काम हो ।
चौथो, सामुदायिक संस्थाबाट वितरण भइरहेका क्षेत्रमा थोकमा महसुल छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । बढी क्षमता वा १० केभिएसम्मको ट्रान्सफर्मर जडान भएको र त्यहाँ टिओडी मिटर जडान गरी विद्युत वितरण भए उपभोक्तालाई छुट वा सहुलियत दिन सकिन्छ ।